यी हुनसक्छन् प्रेमी-प्रेमिकाका लागि भ्यालेन्टाइन उपहार - Everest Talk
यी हुनसक्छन् प्रेमी-प्रेमिकाका लागि भ्यालेन्टाइन उपहार1 min read
२०७६, २९ माघ बुधबार १५:५२
भ्यालेन्टाइन प्रेमी-प्रेमिकाको प्रिय पर्व हो | अझ कसैलाई एकतर्फी प्रेम गरिरहेकाहरूको लागि प्रेम अभिव्यक्त गर्ने सुनौलो दिन मानिन्छ- भ्यालेन्टाइन-डे |
१४ फेब्रुअरी रोमका पादरी भ्यालेन्टाइनको मृत्यु भएको दिन हो । राजाले आफ्ना सिपाहीलाई विवाह गर्न रोक लगाएका बेला भ्यालेन्टाइनले विवाह गर्न सघाएका थिए, त्यसैले उनलाई राजाले मृत्युदण्ड दिए । प्रेम र विवाहका पक्षधर भएकाले संसारले पादरी भ्यालेन्टाइनलाई सम्मानले हेर्न थाल्यो ।
भ्यालेन्टाइनको अर्को महत्व भनेको प्रेमी-प्रेमिकाले एकअर्कालाई उपहार दिनु पनि हो | त्यसैले विभिन्न सपिंग महल , अनलाईनहरूमा फेब्रुअरी १४ सम्म युवायुवतीहरूको घुइचो लाग्ने गर्छ |
प्रेमी-प्रेमिकाबीच सदियौंदेखि उपहार लिनेदिने प्रचलन भए पनि उपहार दिने वस्तुमा भने समयक्रमसँगै परिवर्तन आएको छ | आज हामीले भ्यालेन्टाइनमध्येको पनि विशेष फेब्रुअरी १४ लाई मध्यनजर गर्दै प्रेमी-प्रेमिकाको लागि उपहार लिस्ट तयार गरेका छौं |
प्रेमको अभिब्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा रातो गुलाफलाई लिइन्छ । भनिन्छ गुलाफ उपहारका रुपमा दिएपछि मुखले ‘आइ लभ यु’ भनिरहनु पर्दैन । बजारमा प्राकृतिक र कृत्रिम गुलाफका फूल पाइन्छन् । यस्तो बेला अरु प्रकार फूल, बुके उपहार दिने चलनसमेत छ ।
जोडी कप प्रेमील मनहरूको रोजाइमा परेको छ। आफू र आफूलाई प्रेम गर्नेको फोटो प्रिन्ट गरेर, मायाका मीठा अनुभूति लेखेर उपहार स्वरुप दिन सकिन्छ।
उपहार स्वरूप लकेट दिन सकिन्छ। आफू र आफ्नो नामको अक्षरबाट बनेका लकेट पनि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। लकेटमा नाम मात्र नभएर, फोटो राख्न मिल्ने र फोटोलाई नै प्रिन्ट गरेर उपहार दिन सकिन्छ।
पछिल्लो समय किताब उपहारको चलन बढेको छ । उपहारमा किताब दिनु धेरै राम्रो कुरा हो। यसमा प्रेमकथामा आधारित कथा, उपन्यास दिन सकिन्छ । योसँगै साथीको रोजाइ बुझेर पनि पुस्तक दिन सकिन्छ ।
बजारमा उपहार धेरै पाइन्छ, तर सधैँ याद आउने उपहार हुन सक्छ, औँठी। यसमा सुन, चाँदी र बजारिया औँठी पनि दिन सकिन्छ।
प्रेमील शब्दसहितका कार्ड उपहार दिन सकिन्छ । कार्डमा लेखिएका शब्दले आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्छ। मनमा तरंग फैलाउने खालका मायाका शब्दले भरिएका कार्ड उपहार दिन सकिन्छ।
प्रेमी/प्रेमिकाले दिने उपहारले सधै एक अर्काको याद दिलाई रहन्छ । त्यसलाई घरको दराज, सोकेसमा सजाएर राख्ने गरीन्छ । यस्ता सामग्रीमा टेडी बियर, हार्टसेप पिल्लो, डल, म्याजिक मग, सेरामिक शो पिस, फोटो फ्रेमलगायतका उपहार बजारमा उपलब्ध छन् । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन, ‘आइ लभ यु’, ‘मिस यु’ लेखिएका हार्ट सेपमा डल, पिल्लो, टेडि वियर किन्न पाइन्छ । यस्तै मगमा प्रेमी÷प्रेमिकाको तस्बिर प्रिन्ट गरेर उपहार दिन सकिन्छ । बजारमा शेरामिकका आकर्षक सोपिस ‘भ्यालेन्टाइन उपहार’ अंकित गरेर उपलब्ध छन् । प्रेमी÷प्रेमिका वा दुवैले विताएका रोमान्टिक पलहरूको तस्बिर फ्रेममा हालेर उपहार दिन सकिन्छ ।
अन्य उपहारहरू :
उपहारको कुनै सीमा हुन्न । तपाइले आफ्ना प्रेमी-प्रेमीलाई यीबाहेक अरु आफूलाई उपहार हो भन्ने लागेका जुनसुकै कुरा दिन सक्नुहुन्छ । दर्शाउने त आत्मियता हो । उपहारले त्यसलाई गाढा बनाउन सघाउँछ । तपाइले प्रेम अभिब्यक्त गर्न पफ्र्युम दिन सक्नुहुन्छ । मेल-फिमेल दुवैका लागि बजारमा पफ्युम उपलब्ध छन् । मिठाइ मन पराउने प्रेमीप्रेमिकाका लागि चक्लेट, बार, पेष्ट्रि, कुकिज, बेकरी आइटम उपहार हुनसक्छ । बजारमा भ्यालेन्टाइनका लागि त्यसैअनुसार प्याक गरिएका चक्लेट प्रडक्ट उपलब्ध छन् । बजारमा विभिन्न प्रकारका उपहारहरूको बास्केट प्याकसमेत किन्न पाइन्छ ।
कुनै चिज दिनु मात्र उपहार हैन । प्रेमी÷प्रमिकालाई थाहै नदिइ फिल्म हेर्न लैजाने, लामो यात्रामा घुमाउन लैजाने, कुनै रेष्टुरेन्ट÷तारे होटलमा डिनर गराउन लैजाने, दोहोरी, गजल रेष्टुरेन्ट, डिस्कोथेक लगेर ‘सप्र्राइज’ उपहार दिन सकिन्छ ।
के सोच्दै हुनुहुन्छ ? तपाईँलाई यीमध्ये कुन उपहार उपयुक्त लाग्यो ? भ्यालेन्टाइन आउन ४ दिनमात्रै बाकी छ है † आजै उपहार छान्न गइहाल्नोस् ।
Tags: १४ फेब्रुअरीभ्यालेन्टाइन